hoo!haa!! – Page 18 –
IHE CHEERE NDI NTORỌBIA N’IHU
By: olisa ohaefesi
Nwata nwoke obula ga agbaba mbo maka na o nwegasịrị ọtụtụ ihe siri ike cheere nwoke ọbụla n’ihu, ọkachasi umuaka ndi n’etonite etonite ka ha mara ma nwere ihe uwa nwayo maka na onye ji nwayo adighi emelu ahu, maka na onye jiri nwayo juru ofe roro aro ozuelu yaRead More →
Ilu taa bụ maka Nkwụ/AkwụRead More →
ỤKWỤ BỤ EZE
Egwu anaghị atụ afọ o ji buru ụzọ mana afọ sị ụkwụ ezula ike Ụkwụ gharakwanụ, nọrọ otu ebe, agụụ egbuo afọ. ụkwụ kwooro afọ azọpụ ije Egughee ụzọ, egughee ọnụ ọnụ bụ ọriakụ ebe ibu ọrụ na-anyigbu ụkwụRead More →
Ilu taa bụ maka Agadi/OkenyeRead More →
Ilu taa bụ maka ụlọRead More →
MMA (Matchet)/MMA ( Beauty)
Nwa-afọ Igbo arụọla ụgbọelu ọgbara ọhụrụ
Igbo di egwu!!! Dọkịnta Nkemdilim Añụlịka Ọfọdile bụ onye mbụ rụrụ ụgbọelụ ọgbara ọhụrụ bụ Drone. Drone bụ ụgbọelu na-anya onwe ya. Dọkịnta Ọfọdile ji ọkwa Flaịt Leftenant n’Agha ụgbọelu mba Naịjiriya (Nigerian Air Force). O nweteara nzere mmụta dọkịnta na ngalaba Control Engineering na Mahadum Leicester dị naRead More →
Nwa nkea, abụ ọrụ ebube ka ọ bụ ọrụ fada?
Bikonu, unu na ahụkwa ihe m na-ahụRead More →
Ụdara M Chaa
O ruru otu ụbọchị. Otu nwanyị lọtara ahịa. Ya ewepụta ihe ekeleahịa ọ zụtara. Ihe ekele ahịa o wepụtara mgbe ọ lọtara ahịa bụ ụdara. Ya ekee ụdara ọ zụtara kenyechee ụmụ ya dum, ma o kenyeghị nwantakịrị nne ya nwụrụ anwụ ya na ya bi. nanị ụmụ ya kaRead More →
Lafịya: Ndi ohi agbagbuola ụmụ akwụkwọ na Mahadum Gọọmentị Etiti, Lafịya. Ọnụ na-ekwuru mahadum ahụ, Abubakar Ibrahim, sịrị na otu n’ime ụmụ akwụkwọ ndi ahụ ka ji nzere mmụta ogo nke mbụ(1st class) pụta na Ngalaba Agụmakwụkwọ Okwu Akụnụba (Economics Department). Onye nke ọzọ nọkwa n’agba nke ikpeazụ na Ngalaba AgụmakwụkwọRead More →
ITERead More →
OSISI Read More →
ỤZỌ(Road)/( Early )
ỤZỌ (Road)/ (Early)Read More →
Ibu ókè ibu. (obesity)
IBU ÓKÈ IBU. (OBESITY) Gịnị bụ ibu ókè ibu? Ibu ókè ibu bụ ọnọdụ ebe mmadụ n’akwakọba ọtụtụ abụba n’ime ahụ, nke nwere ike ịnwe mmetụta n’adịghị mma n’ahụike mmadụ. Ọ bụrụ na arọahụ mmadụ bụ opekempe(ọ dịkarịa ala) pasent iri abụọ karịa k’ọkwesịrị ịdị, onye ahụ ebuola ibu.Read More →
OKE Read More →
ỌKỤKỌRead More →
Si n’aka Mazị Emeka AgbakaRead More →
ANYA MKPỤRỤ EGO. (CATARACT)
ANYA MKPỤRỤ EGO. (CATARACT) Anya mkpụrụ ego bụ ebe gbara ọchịchịrị na-enyoanya. Ọ na ebido oge protin dị n’anya bụrụ ịkpaọhịa nke n’egbochi enyoanya ị ziga nhunuuche/oyiyi doro anya n’ala anya. Ala anya n’arụ ọrụ ịtụgharị ìhè n’abata site na enyoanya ka ọghọọ mgbaàmà. Ọ na-eziga ihe mgbaàmà na akwaraRead More →
BradleyJab on MAKA NROPUTA OCHICHI
온라인카지노 on ỌHỊA